Marcus Garvey: ume nke pan-Africanism - Afrikhepri Fondation
Marcus Garvey: Mgbu nke Pan-Africanism
Na-agụ: 10 mins
Marcus Mosiah Garvey, nwa ikpeazụ nke ezinụlọ 11, amụrụ na August 17, 1887 na St Ann's Bay, Jamaica na 1887. Ọ bi n'ọnọdụ nke oke ịda ogbenye. Nke gabigara oke, na ụmụnne ya niile, ewezuga nwanne ya nwanyị Indiana, ga-anwụ na nwata. Ma, ezinụlọ Garvey abụghị ndị ogbenye mgbe niile. Nna ya, onye bụ aka ochie n’ịkwa nkà, na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ dị ka ọkàiwu ma na-enwe oge ụfọdụ ọ́bá akwụkwọ ndị mmadụ. O doro anya na ọ bụ n'aka ya ka Marcus Garvey si enweta agụụ ya maka ịgụ akwụkwọ. N'ihi ụkọ ego, a manyere Garvey ịhapụ agụmakwụkwọ ya mgbe ọ dị afọ 14 iji banye ndị ọrụ ọrụ.
N'ịbụ onye nwere mmasị n'ịgụ ihe, ọ malitere ịrụ ọrụ n'ụlọ obibi akwụkwọ ebe ọ mepere ngwa ngwa. N'oge na-adịghị anya, ọ nwetara nnukwu ọrụ na ọnọdụ dị mkpa n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Nwoke ahụ gaara akwụsị n’ebe ahụ. Ma ugbua enwere ọchịchọ ịlụ ọgụ megide ikpe na-ezighị ezi na ahaghị nhata. N’ezie, n’afọ 1907, mgbe ọ dị afọ iri abụọ, o sonyeere na ọrụ izizi nke ndị ọrụ na-ebi akwụkwọ nke Jamaica, nke dugara na ya ịdebanye aha ya na ndị ọrụ ojii wee chụọ ya.
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, o kere akwụkwọ akụkọ: "Onye Nche" ("onye nche" ma ọ bụ "onye nlekọta") nke ga-abụ nke mbụ n'ime ndepụta ogologo nke akwụkwọ akụkọ na-agbasiwanye ike.
Iji mepụta oru ohuru ma choputa ihe ohuru, Garvey gara Costa Rica na 1909. Ọ bụ n'akụkụ ụwa a ka ọ ga-eme ka ahụmịhe nke ịkpa ókè agbụrụ na nkewa ga-eme ka ọ mata nsogbu ndị isi ojii.
-Enwe ugbu a mkpa ịmụta banyere ọnọdụ ibi ndụ nke ndị isi ojii na ụwa na-apụghị afọ na usoro iwu ihe ọmụma (Garvey ịbụ karịa ihe ọ bụla, dị ka anyị mesie n'okpuru, a pragmatist onye-eto nke ọma ihe ihe ma ọ bụghị naanị ideals), dike anyị kpebiri ịga mba niile ebe ahia ohu na-edu ndị ikom ojii ndị si n'Africa.
Circling na Caribbean na South America (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia na Venezuela), Marcus Mosiah Garvey ẹkeyịbide site nlelị na nke emeso nwa ndị mmadụ na ọnọdụ nke ala nke ọ na- A na-echekwa ebe niile.
Ihe o kwuru doro anya: “ebe niile, a na-emepụ ndị Negro ahụ, na-ejichi ya ike na ntọala nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'ihi na ọ bụ oji. N’etinyetụghị echiche, ọbụghị maka agwa ya nke mmadụ, ma-ọbụ maka ihe nwere ike ịbụ ọgụgụ isi ya ma-ọbụ onyinye ya. Ọ dịghị ebe ndị Negro na-enweghị nsọpụrụ mmadụ. Ebe ọ bụla ọ bụ serf, ohu, "peone". Ebe ọ bụla ọ gara, ndị ojii nọ n'ọchịchị dị ala karịa ndị ọzọ.
Site na nleba anya nke ihe ike na-adịgide adịgide kwa ụbọchị maka ndị isi ojii. N'ịbụ onye nwere mkpebi siri ike a iji zọtọ ​​ya ụkwụ n'ụzọ ọ bụla, Marcus Garvey kpebiri ịlụ ọgụ ahụ.
Nwoke (onye ndu ndu) na-agba ndị ọrụ ojii ume ka ha rịọ ya site na ịlụ, ịkwado ọnọdụ ọrụ na ụgwọ ọrụ ka mma. Dị ka onye na-ekwurịta okwu, ihe a na-eme na edemede, akwụkwọ akụkọ ("La Nacion" na "La Prensa") na Costa Rica na Panama na-ekwughachi okwu ya.
N'ịbụ onye nwere ụdị ihe ahụ, gọọmentị Costa Rican (na-ahụ ya dị ka nke abụọ Toussaint Louverture) nwere mmasị ngwa ngwa na ọrụ ndị Jamaica ma mee ngwa ngwa chụpụ ya na mpaghara ahụ.
N'ịbụ onye na-enweghị afọ ojuju site ná mgbalị nke mgbalị ya, Marcus hapụrụ onwe ya ịlaghachi Jamaica. N'ụzọ tụrụ ya n'anya, a nabatara ya dị ka dike mba. Ọtụtụ Jamaicans na-ahụ ya dị ka onye nduzi. Otu nwoke, otu nwoke nke nhụsianya, nwoke a na-azụ anụ na onye nchịkwa siri ike. Ọ bụ otú ahụ ka anyị si kọwaa nwa okorobịa Mosia Garvey. Nwoke ahu nke meworo ka olu ya nuru na mgba maka imeziwanye ọnọdụ ndu nke ndi oji.
Sikwuo a mba na ike nkwado si ya pro-Negrists echiche 1912, Garvey na-n'isi nke a oge na-Europe, ebe dị mwute ikwu na o mere otu ihe ahụ, sị: N'otu aka ahụ, na Amerika, nwa ndị mmadụ na-emegbu na-emegbu ndị a na-eleda anya na oké iwe.
Ọzọ akara ọnọdụ nke abaghị uru nke na-etinye ojii na ụwa, Garvey na-amalite ihe ga-ugbu a ọgụ nke ndụ ya na nke ga-eri ya ruo mgbe ikpeazụ ya ume. Nke iweli isi ndi ojii elu ma nyeghachi ha ugwu ha.
Ọ bụrụ na ọ ga-adị ndụ, ọ nọrọ n'ọkwá na ọdụ ụgbọ mmiri nke London na Liverpool, nke ahụ enweghị ụzọ gbochiri ya ịchọta oge iji na-agakarị ọgụgụ isi nke ndị Pan-Africanist. O zutere n'ebe ahụ Mohammed Ali Duse (onye isi nke pan-Africanism site na mbido) onye nwere mmetụta dị ukwuu banyere ọdịnihu nke Garvey na onye na-agba akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa pan-Africanist: "The African Times na Orient Review" nke Garvey ga-enye aka. Nzukọ a ga-abụ mkpughe maka Marcus Garvey dịka ọ ga-abụkwa ọgụgụ ọ ga-agụ nke akwụkwọ Booker T. Washington "Si na verygba Ohu". Maka na ọ na - esochi ọgụgụ a na Garvey ga - akpọ ndị otu a ka ha gosi onwe ha dịka onye ndu nke ndị isi ojii.
N'ịbụ onye siri ike na nkwenye ya, na ụfọdụ nke mkpa ọ dị iweghachi ndị ojii ùgwù onwe ha nke onwe ha, furu efu n'ihi ịgba ohu, ịchị obodo, nlelị na mkparị kwa ụbọchị, nwoke ahụ ghọtara ngwa ngwa na ọgụ ahụ ga-abụrịrị na mba ụwa. ala ma karisia nke ozi na echiche. Nke a bụ otu o si agba mbọ ilekọta, ịkọ ma zụọ ndị agbụrụ ojii niile gbasasịrị gburugburu ụwa, ka ha wee nwee ike inweta mmata ọ bụghị naanị na njirimara obodo ha pụrụ iche, kamakwa ebe ha bi, n'ụzọ ziri ezi, dị ka ndị na-adịghị mma, na egwu nke mba dị iche iche.
O kpebiri ịmalite ọrụ ya n'obi nke mba ebe a mụrụ ya. Nke a bụ otú 17 June 1914, ọ hapụrụ England iji laghachi na Jamaica ebe ga-amalite ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ezie.
Garvey si otú a hiwe, na 1914, na Kingston na Jamaica, UNIA Universal Negro's Improvement Association (Universal Association for the Progress of the Blacks) bụ ndị ụkpụrụ ha doro anya: "Otu Ebumnuche, Otu Chineke, Otu Ọdịnihu" (Otu Otu Chineke, otu ihe mgbaru ọsọ, otu akara aka).
Mkpakọrịta nke ebumnuche ya bụ iburu olu nke ndị ojii dịka o kwere mee na inye ha ngwa ọgụ nwere ike ime ka ha nwee nnwere onwe ọgụgụ isi na nke anụ ahụ, iji duga mbido mba na ọchịchị ojii.
Onye isi na-agba charismatic na-ezube ka olu a na ume dị ebube na ntị ndị Negro nile, n'ebe ọ bụla ọ nọ. Ngwa ngwa, otu narị mmadụ gụrụ ndị òtù. Ma, Garvey, iji nye ozi ya zuru ụwa ọnụ ruru ya, hapụrụ Jamaica maka mba ọ garala na 1912: United States of America.
Na 1916, Marcus Garvey gawara United States (mba nke abụọ nke mbula nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị isi ojii mgbe Brazil gasịrị) ebe ọ hụrụ oke nkwukọrịta siri ike nke onye Africa na ozi nnwere onwe nwere ike ịchọta ụda dị egwu. Karịsịa ebe ọ bụ na ndị isi ojii na-eme ka a nụ olu ha.
Na United States, Garvey chọtara obodo ebe nwa okorobịa nọ n'ọnọdụ kacha njọ. Karịa ebe ọ bụla ọzọ, a na-azọ nwa.
Tupu ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ enwee ahụ ike site na iche na ọnọdụ ndị ojii ojii Europe nwere ezigbo anyaụfụ, ka anyị rịba ama na nke a na ọnọdụ a nke United States nyere ohere ngwa ngwa ịmara ndị ojii na npụta ha dị ka ikike na-ekwu na ọ ga-abụkwa n'ọnụ ụlọ nnabata. na-anụ ma na-achọ nkwanye ùgwù site na obodo ndị ọzọ. European racism, nke jọgburu onwe ya na ajọ njọ, na-eme ka ndị mmadụ kwenye na njikọta nwere ike, enweela mmetụta nke igbochi mmata ojii na ịgbachi nkịtị ruo taa nkwupụta niile. Enweghị ihe a na-achọ taa nke na-etinye ndị isi ojii na okpuru mba ndị dịka France. Ruo ókè hà a weaa ka anyị dị n'etiti nne na nna ochie anyị na anyị?
Ọ dịghị onye. Enweghị nkwenye siri ike ma doo anya, nke obodo ojii na-azọrọ na nnọchiteanya na nkwanye ùgwù agaghị abara anyị ezigbo uru. A ghaghị ịgbagha ya.
Maka ndị kwenyere na anyị na-ahapụ isi okwu ahụ… Marcus Mosiah Garvey Onye ukwu, site na mkpebi ya na nkwenye ya, tọgbọrọ ntọala dị mkpa maka ọgụ ọ bụla Negro. Anyị ga-alaghachi na nke ahụ.
N’ikpebisi ike ịnagide ihe ịma aka a na ịlụ ọgụ maka imeziwanye ọnọdụ obibi ndụ ndị Africa-America, Garvey (nke bụ eziokwu nye onwe ya) na-eleta ihe karịrị mba iri atọ dị n’America iji chọpụta ihe ọjọọ karịa nke ọma na ọ ga-alụ ọgụ.
Ihe mbụ ọ ga-eme bụ ịwụnye isi ụlọ ọrụ UNIA na New York iji mee United States, bụ ebe etiti ọrụ ya.
Mgbe niile n'otu echiche siri ike na oke ọchịchọ, Garvey enweghị ike (dịka anyị hụworo) ịtụ anya ọgụ a na-eme na mpaghara ma ọ bụ nke mba ma buru site na mbido, echiche nke ọgụ ụwa. Ọ bụ nke a n'uche ka o kere ihe dị ka ngalaba iri atọ nke UNIA gburugburu ụwa, ebumnuche ya na-agbanweghi agbanwe bụ ịkpọkọta "Ndị ojii niile nke ụwa n'ime nnukwu ihe ma mepụta mba na gọọmentị. nke ha ”jikọrọ n’otu ụdị okwu a:“ Otu Chukwu! Otu ihe mgbaru ọsọ! Otu akara aka! ". Ndị otu si ebe niile wụsa. Na 1921, Garvey mere atụmatụ na nde 6, ọnụọgụ ndị otu Universal Association for the Progress of Blacks in the world.
Garvey gbasara ya ozugbo, oke iwe nke ndị Europe (French, English, Spanish, Dutch, Portuguese na ndị ohu ndị ọzọ na-azụ ahịa ohu) nke na-enweta nnukwu uru site na nrigbu nke mpaghara Afrika na ógbè ha ndị ha suụrụ. akpịrị ịkpọ nkụ maka akụrụngwa na ebe ha nọ na-arụ ọrụ ha nke ọma.
Ha si otú a were echiche a na-adịghị ahụ anya banyere ume a nke emancipation, bụ nke kwuru na ọ bụ mba ụwa ma na-ezubere ịtọhapụ ihe nhụjuanya nke mba ọ bụla. Ewezuga ebe ọ bụla ebe a na-ahụ ihe ndị a ma ama, anyị hụrụ (ma anyị ka na-ahụkwa) n'azụ ha, ndị a ma ama na-eme ihe iji mee ha.
Garvey malitere ngwa ngwa igbu mmadụ. Ọnọdụ ọhụrụ a kwadoro Garvey na echiche ya. Ọ nọ na egwu. Na ka egwu na iwe na-abawanye ma na-elekwasị anya na ya, otú ahụ ka ọ nọgidere na-alụ ọgụ iji gwa ndị mmadụ okwu ma mee ka ha mara na a na-ahụ ya.
Ọ bụ ebe a ka a mụrụ "Mba Negro" ("Negro World"), akwụkwọ UNIA, nke Garvey dere na Jenụwarị 1919, bụ maka ọzụzụ na ịgwa ndị Negro na ịkwado echiche nke ndi mmadu ndi mmadu chuputara na ndi mmadu gbapuru ma choputa omimi ya n'ime obodo ebe o siri ike bu agha: Afrika. Na ebe ọ na-abụ onye ọ bụla na-aga ịlaghachi na-ekere òkè na-ewu nke alaeze dị ike ọchịchị.
Kesaa akwụkwọ akụkọ ya na mpaghara America dum (site na South America ruo North America) ma na-ekesa ya dị ka ọtụtụ nsụgharị, na e nweghị asụsụ colonial (Bekee, French, Portuguese, Spanish na Dutch), onye ndú ojii, si otú ahụ kwuo okwu okwu pan-Africanist, okwu nwere ike imetụ aka na ịtọhapụ ihe omuma, n'agbanyeghị ụdị egwuregwu ha. Site n'ime nke a, ume nke Pan-Africanism.
Garvey si otú a ghọọ onye na-adọrọ mmasị na onye na-ezukọta ma chịkọta ọnụ ọgụgụ buru oke ibu nke ndị na-eche echiche nke ukwuu na ọchịchọ maka ijikọta ndị isi oge ahụ, na-ekwenyeghi na ntụrụndụ nke onye nwere nduzi nke nwere ike ime ka ndi mmadu nile nwee mmetuta, ihe di elu nke onwe ya na ugwu ya.
Na alụmdi na Sarah na-eto eto, ndị iro ya na ndị na-asọ oyi (ọtụtụ ndị na-acha ọcha ma ọ bụghị naanị) dabara n'ọgba aghara.
Ma ha bụ ndị Europe ma ọ bụ ndị America, ha hụrụ na ọnụ ọgụgụ nke Garvey njedebe nke nrigbu ahaziri nke ndị na-adịghị mma nke ha ji akọ tinye na iyi egwu nke nhụsianya nke nnukwu mkpa maka nnwere onwe pụọ na mpaghara Africa.
Ma, olee echiche ya ndị na-atụ ụjọ:
Ọhụụ Garvey dabeere n'ụkpụrụ abụọ bụ isi:
Nke ịdị n'otu nke ndị ojii n'ebe ọ bụla ha nọ n'ụwa, ma ha bụ ndị isi ojii si Europe, America, ma ọ bụ ndị amụrụ na mpaghara Afrịka, ọgụ a bụ otu. Nke icho nkwanye ugwu na ugwu nke ndi mmadu. Nghọta nke onwe a (na n'ihi nsonye nke ndị mmadụ) gafere dịka Garvey si nweta ozi na agụmakwụkwọ. Principlekpụrụ ịdị n'otu a na-arịọ nke abụọ.
O doro anya na ịlaghachi n'ala nna ochie nke Africa na ịnweta nkwanye ùgwù n'ihi ndị ojii na-achọ nguzobe nke ndị dị ike n'ụzọ akụ na ụba, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke ọdịbendị ... ma nwekwaa ụlọ ọrụ nke ya, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, azụmahịa ... na-agba mbọ maka ịlaghachi n'ala Africa.
Ọ na-ekwu, sị: "Nanị nchebe megide ikpe na-ezighị ezi nke mmadụ bụ ike nkịtị, ego, ike sayensị. Ma ọ bụ ọzọ: "Mmụta bụ ụzọ ndị mmadụ na-akwadebe maka ịmepụta ọdịbendị onwe ha na ọganihu na otuto nke agbụrụ ha. "
Quote: “Slagba ohu bụ ọnọdụ e nyere ndị mmadụ n’etiti ha na agbụrụ ndị na-esighi ike ichebe ma ọ bụ ịgbachitere onwe ha. Ọ bụrụhaala na agbụrụ ma ọ bụ ndị mmadụ na-egosipụta ihe egwu nke ịbụ ndị na-adịghị ike, a ga-atụ anya na n'otu oge ma ọ bụ n'oge ọzọ ọ ga-ebelata ịbụ ohu ". Ogbonnia Okoronkwo
“N’ọgụ a na-ebilite, ndị a na-emegbu emegbu na-enwe nsogbu oge niile site n’aka ndị ahụ na-arara agbụrụ nke ha, ya bụ, ndị okwukwe pere mpe, na ndị niile kwere ka emerụ ma nabata ire nke aka ha umunne. (…) Ndi ojoo nke ndi oji, di nwute, bu otutu oge, ndi mmadu no n'ebe di elu site na mmuta na onodu ndi ozo, ndi bu ndi na-ebuli onwe ha elu ndi isi. N'oge a, n'eziokwu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nke na-anwa ọdịmma ya dị ka onye ndu nke agbụrụ ahụ, na-amalite site na ịmepụta onwe ya, dị ka anụ ụlọ, na ihu ọma nke onye na-enyere ndị agbụrụ ọzọ aka: lee, na-eweda agbụrụ ya ala n'okwu kachasị njọ, na-eweda mpako ya ala dị ka nwoke ma si otú a nweta ọmịiko nke "nnukwu onye enyemaka", onye na-agwa ya ihe ọ ga-eme na ọrụ ya dị ka onye ndu nke agbụrụ ojii.
Marcus Garvey: Nna nke Peoplesdị n'Otu Ndị Ndị Africa - Olu 1 - Ndụ ya, echiche ya, ihe ọ rụzuru
3 ọhụrụ site na .28,95 XNUMX
6 ejiri site na € 20,36
Zụta € 28,95
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 7, 2021 4:28
Afo Afrika sitere na tarot
Akon Lighting Africa to Light 600 million Africa
Egwuregwu nke ndụ na otu esi egwu ya - Florence Scovel Shinn (Audio)
Na-ekiri Nwaanyị di ya nwụrụ (2018)
Ndụ dị ndụ - Akwụkwọ Ndekọ (2014)